Izimangaliso ze-GNU / Linux: Ukuphefumula okusha kuyatholakala! Ukuphendula noma i-Distros? | Kusuka kuLinux
Kulesi sikhundla sokuqala sangoMeyi, sizokhuluma ngakho «Izimangaliso ze-GNU / Linux », a Phendula (bukhoma futhi okungafakwa kanye nesifinyezo sangokwezifiso) ngokuya nge- I-GNU / Linux Distro shayela «I-MX Linux », eyenzelwe izinhloso noma izinhloso ezihlukile.
Futhi ngisebenzisa ithuba lokuthi ikhishwe ngokusemthethweni izolo, a inguqulo entsha 2.3 (3DE4) ngaphansi kwe- igama lekhodi Ultimate, kufanelekile ukuhlola nokuphawula kakhudlwana kulokhu okushiwo Phendula.
1 Yini impendulo?
2 Mayelana ne-MX Linux
3 Izimangaliso GNU / Linux: Ukubuyekezwa komuntu siqu (okungekho emthethweni) kwe-MX Linux
3.1 Yini iMilagrOS?
3.2 Yini okusha kunguqulo yakamuva yeMilagrOS GNU / Linux?
3.2.1 Izici nezinhloso ezivamile
3.3 Landa, ukufaka, ukusebenzisa nezithombe-skrini
3.3.1 A.- Imvelo yeDeskithophu ye-XFCE
3.3.2 B.- Imvelo yedeskithophu yePlasma
3.3.3 C.- Imvelo yeDeskithophu ye-LXQT
3.3.6 F.- Umphathi we-OpenBox Windows
4 Ukuphendula noma i-Distros?
Ngaphambi kokungena ngokugcwele ukukhuluma ngaye Phendula «Izimangaliso GNU / Linux», kubalulekile ukucacisa futhi ukuthi iyi- Phendula. Ngalokhu, sincoma ukushicilelwa kwangaphambilini okulandelayo:
"Qonda i-Respin, isithombe se-bootable (bukhoma) nesifakekayo esingasetshenziswa njengendawo yokubuyisela, indawo yokugcina kanye / noma ukusabalalisa kabusha kwe-GNU / Linux Distribution, phakathi kokunye ukusetshenziswa. Futhi lokho kwakhiwe kusuka ku-ISO noma ukufakwa kwe-GNU / Linux Distro ekhona. Endabeni ye-MX Linux, kune-MX Snapshot, okuyithuluzi elifanele lale nhloso, futhi okuyisikhundla samanje nesisebenza kahle samanye amathuluzi amadala, njenge «Remastersys y Systemback», kepha lokho kusebenza kuphela kwi-MX Linux." Isifinyezo se-MX: Ungayakha kanjani i-MX Linux Respin yomuntu siqu futhi efakekayo?
Mayelana ne-MX Linux
Futhi kulabo abangazi noma abangasebenzisi «I-MX Linux » sincoma ukuhlola okuthunyelwe kwethu kwangaphambilini okulandelayo Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux, ukuze bayazi futhi babone amandla ayo athakazelisayo, angagcini lapho ukwenziwa kwezimpendulo:
"UMX Linux uwenaINa Distro GNU / Linux yenziwe ngokubambisana phakathi kwemiphakathi ye-antiX neMX Linux. Futhi kuyingxenye yomndeni wama-Operating Systems enzelwe ukuhlanganisa ama-desktops amahle futhi asebenza kahle ngokuzinza okuphezulu nokusebenza ngamandla. Amathuluzi ayo wokuqhafaza ahlinzeka ngendlela elula yokufeza imisebenzi enhlobonhlobo, kuyilapho i-Live USB namathuluzi we-snapshot asuka ku-antiX engeza ukuthwala okuhlaba umxhwele namakhono amahle wokuvuselela amandla. Ngaphezu kwalokho, inokusekelwa okubanzi okutholakala ngamavidiyo, imibhalo nangeforamu enobungane kakhulu.".
I-MX Linux: Iyaqhubeka nokuhola usezingeni le-DistroWatch ngezimanga eziningi
Izimangaliso GNU / Linux: Ukubuyekezwa komuntu siqu (okungekho emthethweni) kwe-MX Linux
El Phendula «Izimangaliso GNU / Linux» njengokusho kwakhe Iwebhusayithi esemthethweni kubizwa "Iphrojekthi ye-Tic Tac" okulandelayo:
"IMilagrOS GNU / Linux, inguhlobo olungekho emthethweni (Respin) lweMX-Linux Distro. Okuza nokwenza ngokwezifiso ngokweqile nokwenza kahle, okwenza kube kuhle kumakhompyutha angama-64-bit, awezinsizakusebenza eziphansi noma ezindala, kanye nezanamuhla neziphezulu, kanye nabasebenzisi abangenakho noma abanomkhawulo amandla we-Intanethi nolwazi lwe-GNU / Linux . Uma isitholakele (ilandiwe) futhi yafakwa, ingasetshenziswa ngempumelelo nangendlela efanele ngaphandle kwesidingo se-Intanethi, ngoba konke okudingayo nokuningi kufakwe ngaphambilini". Izimangaliso GNU / Linux (New MinerOS)
Yini okusha kunguqulo yakamuva yeMilagrOS GNU / Linux?
Izici nezinhloso ezivamile
Ngokuvamile, i-Respin inezici ezilandelayo nezinhloso ezivamile, zazo zonke izinhlobo zayo:
Amaphakeji ahlukahlukene (i-firmware, imitapo yolwazi kanye nezicelo) zenhloso ejwayelekile, nezinhloso ezithile, ezinjengamashayeli wehadiwe (amanethiwekhi weLAN neWiFi, amaPrinta namaMultifunctional) nezinhlelo zokusebenza zehhovisi nezokusetshenziswa kwezobuchwepheshe, i-multimedia ne-gamer, nezimayini zedijithali.
Izilungiselelo ezinhle nokwenza kahle, ngokusetshenziswa kwayo okuphansi kwe-CPU nokusetshenziswa kwe-RAM ekuqaleni, kanye nokuvala nokucisha kwayo okusheshayo.
Ukwenza ngezifiso okuhehayo wezindawo zakho ezihlukile zedeskithophu (ama-DE) nezimenenja zamawindi (ama-WM), asevele efakiwe, afakiwe futhi amisiwe.
Ukungena ngemvume okulula, ngokusho kokunambitheka komsebenzisi nezidingo zekhompyutha esetshenzisiwe, nganoma iziphi izindawo zayo ezihlukile zeDeskithophu (ama-DE) namaWindows Administrators (ama-WM).
Yonga isikhathi kuzinqubo ezivamile, okufana nokufakwa okude, ukumiswa nokwenza ngokwezifiso kohlelo olusebenzayo, kanye nesikhathi esibalulekile ekufakweni nasekucutshungulweni kohlelo lokusebenza.
Gwema ukusetshenziswa kokuqala kwe-Intanethi, ukuze ube ne-GNU / Linux Distro ephelele futhi esebenzayo.
Lungiselela ukufana kokusetshenziswa kweLinuxNgamanye amagama, ukukwazi ukuba ne-GNU / Linux Distro efanayo nokumiswa okufanayo kumakhompyutha ahlukile, kanye nokukwazi ukuyiphatha yonke indawo ngaphakathi kwe-USB Drayivu, njenge-Distro yokusetshenziswa kwansuku zonke kanye ne-Rescue and Repair Distro .
Owokugcina inguqulo 2.3 (3DE4) Ultimate, ikhishwe ngokusemthethweni ngomhla ka- 01 / 05 / 2021, futhi inezindaba ezilandelayo maqondana nokwedlule kwayo inguqulo 2.2 (3DE3) Omega:
Kufakwe amaphakheji amancane, afana ne-: i-adobe-flashplugin, i-anydesk, i-atmel-firmware, i-blender, i-caliber, i-clamav, i-codeblocks, ukungezwani, ukuphuma, i-flatpak (izinhlelo zakho zokusebenza kuphela nezinto ezifakiwe hhayi uhlelo lokusebenza), amabhokisi we-gnome, librecad, lxc, krita, kdenlive, papirus- izithonjana-izingqikithi, ukuklwebheka, i-thunderbird, i-uuid-dev nesikhathi se-run-run, umphathi we-virt, iwayini, phakathi kwezinye izinhlelo zokusebenza eziningi nemitapo yolwazi.
Amaphakeji amasha afakiwe, njenge: atomicwallet, byobu, dvdstyler, dvdisaster, gamemode, google-chrome, gpodder, intel-gpu-tools, libcurl4-openssl-dev, libgl1-mesa-glx, libqt5websockets5, linux-firmware, multidoge, python-newt, python-setuptools , i-pywall, isikrini, i-simplescreenrecorder, i-smart-notifier, isihlahla, okuhlukahlukene, umthombo we-xorg-server, zenmap.
Kufakwe iMenenja entsha yewindi: Manje ifaka i-IceWM, kanye ne-FluxBox, i-OpenBox ne-I3WM. Nezindawo zeDeskithophu: XFCE, Plasma neLXQT.
Ukuhlela okukodwa ku-ISO encaneI-Version 2.3 (3DE4) Ultimate manje iza nge-3.2 GB ISO eyodwa (+/- 3.4 GB net), ngokungafani nenguqulo yangaphambilini engu-2.2 (3DE3) efike ngezinguqulo ezi-2, i-ISO Full shayela +/- 4.4 GB i-Omega kanye ne-ISO Lite shayela +/- 2.2 GB i-Alpha.
Landa, ukufaka, ukusebenzisa nezithombe-skrini
Ngokuya ngewebhusayithi yayo esemthethweni, esivele ishiwo, izixhumanisi zayo zokulanda zimi kanje:
Landa iMilagrOS 2.3 no-2.2 -> I-GDrive - I-Mega
Landa iMilagrOS 2.0 no-2.1 -> I-Mega
Ungazama futhi «I-MilagrOS GNU / Linux» kuwebhusayithi ye-DistroTest ngokuchofoza kusixhumanisi esilandelayo: Zama i-MilagrOS GNU / Linux 2.X online ku-DistroTest.
Ukufakwa kwayo nokusetshenziswa kwayo kufana ncamashi nokwanoma iyiphi «I-MX Linux », ngakho-ke kuzokwanela ukubona noma iyiphi imanuwali noma ukufakwa bese usebenzisa ividiyo kulokhu I-GNU / Linux Distro. Umehluko wangempela yilokho «I-MX Linux » iza kuphela ne- I-XFCE, noma i-Plasma noma i-FluxBox, ngenkathi ikhona "Izimangaliso GNU / Linux" ungasebenzisa noma yikuphi kokuhlukahluka kwayo Ama-DE nama-WM.
Ngakho-ke, uma usufakiwe, "Izimangaliso GNU / Linux" ingaqalwa nganoma yikuphi okuhlukahlukene kwayo Ama-DE nama-WM, njengoba kukhonjisiwe ngezansi:
A.- Imvelo yeDeskithophu ye-XFCE
B.- Imvelo yedeskithophu yePlasma
C.- Imvelo yeDeskithophu ye-LXQT
F.- Umphathi we-OpenBox Windows
Ukuphendula noma i-Distros?
Njengoba ukwazi ukubona, a Phendula yenziwe nge I-MX Linux noma i-Antix kungaba a okunye okuhle kakhulu kulabo labo qala emhlabeni we-Linux noma unayo ukuphatha kancane inqubo yokufaka, ukumisa nokwenza kahle of a I-GNU / Linux Distro, njenge, I-MX Linux noma i-Antix okumsulwa noma amanye ama-Distros afana I-Debian GNU / Linux, ngoba, yize ihle kakhulu, imvamisa idinga i-intanethi ukwenza ukufakwa okuphelele okwenelisayo kanye nesikhathi eside sokufaka, ukumisa, ukwenza kahle nokwenza ngokwezifiso.
Un Phendula inethuba lokukwazi ukwenziwa ku- isidingo somsebenzisi, iqembu lomphakathi noma inhlangano, ukunciphisa ukusetshenziswa kwe-intanethi ukufakwa ngempumelelo kuhlobo olulodwa noma ezinhlobonhlobo zamakhompyutha, nokunciphisa izindleko zamahora / zabasebenzi nokuthanda ukufana kukho konke ukufakwa.
Ngenkathi, a I-GNU / Linux Distro msulwa njengoba I-Debian, Ubuntu, iMint nezinye ngokuvamile iphelele noma ilungele abasebenzisi abaphakathi noma abathuthukile emhlabeni we-Linux, ngoba baletha kuphela okudingekayo kancane kwi-ISO encane ukuze kuthiwe umsebenzisi wakha kusuka kusisekelo esiqinile futhi nge-Intanethi konke okudingekayo, kokubili kukhompyutha nakwiseva, uma kunesidingo.
Futhi njengoba nje "Izimangaliso GNU / Linux" yakhelwe i- imishini yesimanje engama-64 Bit ngezinsizakusebenza ezimbalwa noma eziningi, ungenza i-Respin nge I-MX Linux noma i-Antix ukuze amakhompyutha amadala angama-32-bit kwezinsizakusebenza ezimbalwa noma ezincishisiwe, njenge, Kuphendula ubizile «I-Loc-OS» y I-Cereus.
Ekugcineni, uma uzithande zonke lezi zizathu, sikumema ukuthi uhlole le enye incwadi ehlobene nayo eyedlule:
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «MilagrOS» I-GNU / Linux, i-Respin ethokozisayo neyesimanje (isifinyezo esibukhoma nesifakekayo nesingokwezifiso) esisuselwe «I-MX Linux », okuza futhi ne ukwenza ngokwezifiso ngokweqile nokwenza kahle, okwenza ikulungele Amakhompyutha we- "64 Bit" kwanoma yikuphi ukumiswa; yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, ngakho konke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Izimangaliso ze-GNU / Linux: Ukuphefumula okusha kuyatholakala! Ukuphendula noma i-Distros?
Ukusho ukuthi lokhu kungaba ngcono kune-debian, lokho kungukushiseka ngokweqile futhi wazi okuncane kakhulu ngeLinux. IMxlinux iyi-distro engeyimbi, bengiyifakile izinyanga ezimbalwa ngagcina ngiyikhipha, ngoba iyi-distro esenokuningi kokupholisha, inokuhluleka okuqhubekayo ekugcineni okuthinta amabhola akho, ngokwesibonelo i-usb nobusuku obubodwa ayizange ibathole nezinto eziningi ebezihlale zihamba kahle ngaphandle kokuthi wenze noma yini ku-distro ngokungazelelwe kwehlulekile. Kwenye i-pc ngibe nokuhlolwa kwe-debian iminyaka emi-3 kanti eminyakeni emi-3 usuku alukakafiki lapho ngingenankinga eyodwa futhi lokho ukuhlolwa kwe-debian, okumele kuhlolwe futhi i-bua ayizinzile futhi enjalo, lutho ukuqhubeka Kusuka eqinisweni, ukungazi okumsulwa, ngibe nezinkinga eziningi nge-debian ezinzile kunokuhlolwa kwe-debian futhi ngiyazi abantu abachitha isikhathi seminyaka engama-20 ngokuhlolwa kwe-debian hhayi inkinga eyodwa, i-debian iningi le-debian. Njengamanje i-xubuntu ingcono kune-mxlinux ne-Linux mint, i-mxlinux ngiyifakele i-xubuntu futhi kuyinto enhle kakhulu engiyenzile futhi lokhu okwethula lapha akuyona into edlula ibhomu lesikhathi eligcwele izinto eziyizigidi eziyizinkulungwane, futhi i-mxlinux oyichitha uhhafu impilo yakho ikhipha izinto eziningi ezingenamsebenzi, ngoba uma uyibeka emafutheni amaningi, yicishe bese sihamba, umbhedo, lokhu kunalokho yi-anti distro.
Ukubingelela, Antidistro. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Ukuphendula okuvezile, ngishintshe le nkulumo kancane, ngoba impela i-Respin ingaba yindlela enhle kakhulu kulabo abaqala emhlabeni we-Linux noma abanolwazi oluncane ngenqubo yokufaka, ukumisa nokwenza kahle ye-GNU Distro / Linux , njengochwepheshe noma umsebenzisi okungewona oweWindows, ngenkathi i-GNU / Linux Distro emsulwa efana ne-Debian, Ubuntu, Mint nezinye ngokuvamile ziphelele noma zilungele abasebenzisi abaphakathi noma abaphambili kwiLinux World, ngoba, baletha kuphela lokho okudingeka kancane nge-ISO encane ukuze, umsebenzisi athi wakha kusuka kusisekelo esiqinile futhi nge-Intanethi konke okudingekayo, kokubili kukhompyutha nakwiseva, uma kunesidingo.
Uma kusebenza kuphela kwi-distro ethile, inzalo encane ine-respin.
Ukubingelela, Diego. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Futhi impela, asethembe ukuthi ithuluzi le-MX Snapshot liba yindawo yonke yamanye ama-GNU / Linux Distros. Kodwa-ke, kunezindlela eziningana (amathuluzi) atholakalayo yize engasebenzi kahle noma esebenziseka kalula, njengeLinux Respin (https://linuxrespin.org/) neRemasterSys. Esokugcina, bengikusebenzise phambilini, ku-Ubuntu 18.04 futhi ngenza impendulo enhle kakhulu. Futhi-ke, njalo kulabo abasethuthuke kakhulu, ukusebenzisa i-LFS (Linux From Scratch) kusuka ekuqaleni, yenza eyakho i-Distro ngendlela oyithandayo. Ngiyethemba, ukwehluleka lokho, i-GNU / Linux Distro ngayinye izokhipha ithuluzi layo lokwenza Izimpendulo.
Hummm, ngizonamathela kwi-linux yami ye-Mint 20 esebenza kahle kakhulu, impela uma kungokwalabo abaqala kahle kwi-Linux, kukhona enye i-distro yokuthi labo abaqala ku-Linux bazoyithanda ngenxa yokuthi isebenza kahle kanjani futhi iza nakho konke okufakwe ngaphambili, yiZorin. Mayelana
Ukubingelela, i-Octavio. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Impela, ukusetshenziswa kwepin eyenziwe kunoma iyiphi i-GNU / Linux Distro, futhi eyenzelwe umuntu, iqembu, umphakathi noma inhlangano kunezinzuzo eziningi, ikakhulukazi kulabo abaqala kuleli zwe leFree Software, Open Source ne-GNU / Linux. Futhi mayelana neZorin, ngicabanga ukuthi iyi-distro enhle futhi enhle, ikakhulukazi yama-newbies nabaqalayo.
Ngiyayithanda iMilagros GNU / Linux, kepha inenkinga efana nebhodi lomama le-MX-LINUX, iFlatpak. Uma uzama ukufaka noma iyiphi iphakethe ngeFlatpak, eyodwa ithatha unomphela futhi ibe mibili, ishayisa i-PC okwesikhashana ngaphandle kokukwazi ngisho nokuvula iThunar isikhashana.
Sanibonani, Aranqoti. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Angizange ngivivinye i-flatpak kwamanye ama-Distros, ngoba bengisebenzisa iMX Linux neMilagrOS iminyaka emithathu. Kepha, ngaphandle kokwazi ukuthi ukufakwa kwephakeji le-flatpak kuthatha isikhathi esingakanani, ngizwa sengathi ku-MX Linux / MilagrOS kuthatha isikhathi eside.
Yebo, ziyandiza, angazi kahle ukuthi inkinga ikuphi, kepha sengibonile ezinkundleni zokuxhumana ukuthi kwenzeka into efanayo nge-MX-LINUX neMilagrOS, futhi angikaziboni izixazululo futhi kuyadabukisa, ngoba iFLATPAK kwande kakhulu nsuku zonke futhi uvumela ukufaka izinhlobo zakamuva zezinhlelo zokusebenza eziningi
Impela. Futhi yebo, iFlatpak ithembisa okuningi ngokuqhathaniswa ne-Snap. Futhi i-AppImage isempini yokuzibeka yona.
Nginayo le Respin efakwe kwi-laptop ye-AMD E1-2500 enezinsiza ezine-4GB yenqama. Iqiniso ukuthi lihamba kahle impela, iqembu lishesha kakhulu. Kule khompyutha bengikade ngifake iMx-Linux phambilini nge-KDE (ngisebenzisa ideskithophu efanayo eMilagrOS) futhi ijubane lekhompyutha lalicasula.
Inhloso yami ngokuhamba kwesikhathi ukufaka iDebian nge-KDE kuleyo khompyutha, kepha angazi ukuthi ngizobuthola yini ubungako obunabo manje neMilagrOS. Angazi noma ungenza yini umhlahlandlela omncane noma okokufundisa kwalokhu «ukumiswa okuhle nokwenza kahle, ngokusetshenziswa kwayo okuphansi kwe-CPU ne-RAM ekuqaleni, kanye nokuvala nokuvala kwayo» okwenzile kule mpendulo, ngoba ziyabonakala impela, noma okungenani kukhompyutha yami ziyabonakala.
Ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi wakho 🙂
Sanibonani, Kirulo! Siyabonga ngokuphawula kwakho. Phakathi kokulungiselelwa okuningi okwenziwe eMilagrOS sisebenzisa i-Preload ne-Prelink, ngaphezu kwe-Deborphan ne-Localepurge. Kepha, ngokuyisisekelo, izinhlelo zokusebenza eziningi, imitapo yolwazi kanye nezengezo zifakiwe, futhi kuqinisekiswa ukuthi kuphela okudingekayo kulayishwa kwimemori lapho kuqala, okungukuthi, ukukhubaza izinsizakalo. Ukwenza lokhu, sikhubaza okungadingeki ekuqaleni uma sisebenzisa inketho ye- "Session and Start" ye-XFCE nohlelo lokusebenza lweStacer. Futhi, iMilagrOS isebenzisa inguqulo ye-AHS ye-MX Linux, kepha ne-kernel yakudala ukuhambisana okwengeziwe namakhompyutha anezinsizakusebenza eziphansi. Ngincoma ukuthi uhlole lokhu okuthunyelwe kwangaphambilini ukuze ubone into yokwenza okuhle: https://blog.desdelinux.net/como-optimizar-gnu-linux/
I-GNOME CIRCLE: Iphrojekthi Yezicelo Nemitapo Yezincwadi ye-GNOME
Imininingwane yamachashazi athunyelwe yi-University of Minnesota iveziwe